Banjina Iray Mikasika Ny Tontolombolongana Ao An-tandrok’i Afrika Sy Sodàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2018 16:10 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy navoaka tamin'ny Novambra 2005)
Milaza an'i Etiopia sy Somalia ary i Eritrea ny teny hoe ‘Tandrok'i Afrika’ ato anatin'ity tatitra ity
Revo amin'ny fandanjalanjàna ny teo-draharaha politika ao amin'ny fireneny ireo Etiopiana bilaogera taorian'ireo fifidianana solombavam-bahoaka natao tamin'ny volana May 2005, izay nandresen'ny antokon'ny Praiminisitra Meles Zewani eo amin'ny fahefana. Tao anaty lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Politics is the Continuation of War by Other Means, (Fitohizan'ny ady amin'ny fomba hafa ny politika) kianin’ i Ethiopundit ny governemanta Etiopiana noho ny fomba izay nitantanany ireo fifidianana sy ny famonoana an'ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny volana Jona, ankoatra ireo zavatra hafa.
Mamerina mampita hafatra iray mitovitovy amin'ny an'i Ethiopundit ny Ethiopian Paradox, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nifantoka manokana tamin'ny Praiminisitra Etiopiana Meles Zenawi. Toa tena tsy faly mihitsy amin'ny hetsik'Andriamatoa Zena hanafoana ny zo tsimatimanota an'ireo solombavambaoaka mpanohitra, ny Paradox Etiopiana, mandray amin'ny Praiminisitra ho toy ny “mpanao didy jadona ratsy fanahy” mikatsaka ny “handemy ny Mpanohitra sy hampanjaka tahotra ary horohoro eo anivon'ireo olona notendreny.” Fampiasana matetika endrika tononkalo amin'ny fanoratana ny sasany amin'ireo soratra amin'ny blaoginy (ohatra amin'izany ny Fanavaozana Ara-tsaina), sahala amin'ny averin'ny Ethiopian Paradox ametraham-panontaniana indray ireo fomba fanaon'ny governemantan'i Praminisitra Meles Zenawi.
Raha mibanjina an'ireo olana hafa ao anaty tontolombolongana Etiopiana, taterin'ny Friends of Ethiopia ny momba ny fanhehoankery nataon'ireo Etiopiana Jiosy, fantatra amin'ny anarana hoe Falasha Mura, tao Jerosalema momba ny tsy nahavitàn'ny governemanta israeliana nitondra ny havan'izy ireo akaiky ho any amin'ny fanjakana Jiosy. Topazan'ny Friends of Ethiopia maso ihany koa ny fifandirana momba ny sisintany Etiopiana-Eritreana sy ny setriny avy amin'ny iraisam-pirenena.
“The Passion of the Present”, blaogy iray mikendry ny hanolotra sehatra iray hifanakalozana hevitra momba izay fomba hampitsaharana ny fandipahana olona ao Darfur, ao Sodàna, no miresaka momba ilay solombavambahoaka Kanadiàna, David Kilgour, izay manery ny governemanta Kanadiana hampitombo betsaka ny fanampiany an'i Darfur ary manery an'ireo firenena afrikana sy OTAN mba hanampy bebe kokoa an'ireo faritra sahirana. Asehon'ilay bilaogy ihany koa ny itafatafa mahaliana niaraka tamin'i Salva Kir, Filoha lefitra voalohany ao Sodàna sady mpikambana mpanorina ny Sudan People's Liberation Movement – Hetsi-Bahoaka ho Fanafahana ani Sodàna (izay notontosain'ny New vision, gazety malaza mpiseho isanandro ao Ogandà).
Sleepless in Soudan, nosoratan'ny vehivavy iray mpiasa amin'ny sosialy dia milaza ny fivorian'ireo mpitondra nokarakarain'ireo mpikomy SLA tao Sodàna, ary mampiseho sary iray momba ireo olana amin'ny fiainana ao Dafur.
Feno tantara mahaliana mikasika fiainana sy politika ao Somaliland ny Inside Somaliland an'i Yvette Lopez – firenena iray miady ho amin'ny fankatoavan'ny iraisampirenena. Mitatitra an’ireo fifidianana vao haingana tao Somaliland i Yvette. Mety hanana ny governemantany manokana i Somaliland, ny lalànany sy ny lalàmpanorenany, saingy izao tontolo izao mihevitra azy ho mbola ampahany amin'i Somalia. Hatramin'ny taona 1991, tsy nanana governemanta foibe niasa i Somalia. Revo manao blaogy mikasika ny firenen'izy ireo ihany koa ireo vahoaka Somaliland mpila ravinahitra. Jereo ny blaogin'i Ahmed Quick The Voice of Somaliland Diaspora – Ottawa (Ny Feon'ireo Zanaka Ampielezan'i Somaliland ao Ottawa)